DEG DEG :- MADAXWEYNE AFRICAN AH OO SHEEGAY IN UU DHINTEY KA DIBNA UU SOO NOOLADEY | Saxil News Network
DEG DEG :- MADAXWEYNE AFRICAN AH OO SHEEGAY IN UU DHINTEY KA DIBNA UU SOO NOOLADEY
Zimbabwe (SaxilNews):- Madaxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa dib ugu soo laabtay dalkiisa kuna kaftamay inuu dhintay kadibna soo noolaaday kadib markii uu ka soo laabtay safar uu ku tegey dalka isutagga Imaaraadka Carabta.
Mugabe oo 92 sano jir ah ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Harare waxana uu muuqaalkiisu ahaa mid caafimaad qaba markii uu ka soo degey diyaarad uu ka soo raacay Dubai.
Warar laga helay xafiisyada duulimaadyada ayaa sheegaya in diyaaradii uu soo raacay inay ku sii jeeday Bariga Asia laakiin diyaarada ayaa u jiheysatay Dubai. Waxana uu Mugabe sheegay in uu u aaday Dubai arrimo qoys.
Wararka ku saabsan duulimaadkan ayaa dhalisay in la isla dhex maro in Mugabe uu xanuun daran hayo uuna daawo u raadsaday Dubai halka wararka qaarkood ay sheegayeen inuu geeriyooday.
Bishii May ee aynu ka soo gudubnay ayay xaaska Mugabe Grace sheegtay in Mugabe uu ka soo xukumayo dalkiisa haddii uu geeriyoodo.
Shabakada The Southern Daily ayaa qortay war ay cinwaan uga dhigtay; “Robert Mugabe ayaa waxa ku dhacay maskax qalal,waxaana madaxweyne ku meelgaar ah Mnangagwa.”
Wakaalada wararka Reuters ayaa sheegtay in markii uu ku soo laabtay Mugabe magaalada Harare inuu u sheegay saxafiyiinta isagoo ku hadlayay luqada dalkiisa ee Shona: “Waxaan u aaday Dubai arrimo quseeya mid ka mid ah carruurteyda.
Waxana uu Mugabe sii raaciyay isagoo kaftamaya “Haa,waan dhintey, waa run dibna waan u soo laabtay sida marwalba aan sameeyo. Marka aan dalka dib ugu soo laabto waxaan ahay qof dhab ah.”
Mugabe ayaa ahaa madaxweynaha dalka Zimbabwe tan iyo sanadkii 1980kii waxana uu sheegay in marlabaad uu u tartami doono xilka madaxtinimada sanadka 2018.
Caasimada Zimbabwe ayaa dhowaan waxaa ka dhacay banaanbaxyo loogaga soo horjeedo dowlada iyadoo tobanaan ruuxna xabsiga la dhigay.
Booliska dalka Zimbabwe ayaa waxa ay ka mamnuuceen caasimada banaanbaxyo muddo labo toddobaad ah. Mugabe ayaa wacad ku maray in uu baabi’in doono mucaaradka.